Izindlela Zokugwema Ukwebiwa Kwezifuyo Epulazini
Prevent Stock Theft
Ngaphandle kokulandela umthetho ukwenza kube lula ngamaphoyisa ukuthi abambe futhi ashushise amasela, i-National Stock Theft Prevention Unit inikeza izeluleko ezilandelayo ngezindlela abalimi abangazivikela ngazo kulobu bugebengu.
Gcina Kahle Izakhiwo
Qinisekisa ukuthi izicingo kanye namasango asesimweni esifanele futhi usebenzise omunye umuntu ukuba ajikeleze nsuku zonke futhi alungise izicingo lapho kunesidingo. Ukulayisha amathampula kumaddocks noma kumapulazi kude nokuqondisa okuqondile kufanele kugcinwe kuvaliwe noma kuvinjelwe ukuvimbela amaseva esitolo ukuba angawasebenzisi.
Gcina Izilwane kude Nasemigwaqeni Yomphakathi
Izilwane ezidla noma ezigcinwa eduze nemigwaqo yomphakathi zivikelekile kakhulu, ngakho thatha izinyathelo ezingaphezulu zokuvikela lezi zilwane. Misela umalusi ukuba anakekele noma athole idivayisi yokuphepha eyokuxwayisa lapho umhlambi wakho uqala ukwenza ngokungaqondakali-ngokubanjwa kwesitokisi, ngokwesibonelo, bazogijima ngomzamo wokubalekela abenzi bokubi.
Lapho uthenga umhlaba omusha, zama ukuthenga umhlaba eduze nendawo yokuhlala ukuze kube lula ukwazi ukuthi kwenzekani ezweni lakho. Ukungabi khona kwenza ipulazi lakho libe lula.
Qiniseka ukuthi wazi wonke umuntu epulazini futhi ugcine irekhodi lezivakashi. Ungavumeli ukuhleleka noma abantu abangaqashiwe ukuba bahlale endaweni yakho. Abafokazi abangena epulazini noma abasebenzi abavakashelayo kufanele bathole imvume yakho ngaphambi kokungena kule ndawo.
Lapho usebenzisa abantu abasha, hlola izizinda zabo. Thola ukuthi kungani bayeke imisebenzi yabo yangaphambilini bese bebuza kusuka kuma-SAPS ukuthi banalo irekhodi lobugebengu.
Thola Umphakathi Ohlangothini Lwakho
Yenza wonke umphakathi epulazini lakho, kusukela kwabasebenzi kuya kwabathengi bawo, wazi izingozi zokukwabelana ngolwazi mayelana nemisebenzi yasemapulazini futhi uwafake ohlangothini lwakho ngokubanika isithakazelo esifanele ekuphepha epulazini, ngokwesibonelo, evumela isisetshenziswa sabo ukuba sihlanganise futhi sidle nesitoko sakho. Wonke umuntu kufanele ahlolisise noma yikuphi uhlobo lokungahambi kahle okungaphazamisa ukuphepha kwanoma ubani epulazini.
Vary imisebenzi epulazini ukuvimbela abasaziwayo ekukhulumisaneni imisebenzi epulazini ngaphandle epulazini. Ngakho-ke ungabizi izilwane ngesikhathi esifanayo usuku ngalunye bese uzama ukushayela imizila ehlukene uma uhlola izilwane.
Qaphela, ikakhulukazi phakathi nenyanga egcwele, ngezimpelasonto, ekupheleni noma ekuqaleni kwenyanga, inkathi yemikhosi noma ngezikhathi owaziyo kusukela ekuhlangenwe nakho komuntu lapho ukukhwabanisa kwesitoko kwenzeka.
Bika ngokushesha esitokisini sakho sokubanjwa kwesitokisi uma izicwaningi zezilwane bese ufihla abathengi bethambo noma abadayisi bemfuyo bahlala endaweni yakho futhi ugcine irekhodi elifanele labathengi bezimfuyo abazofika ngokushesha uma ufaka izingxoxo.